Olee otú ịkwụ ụgwọ Bluetooth si emeghe ihu ọhụrụ | Martech Zone
Olee otú ịkwụ ụgwọ Bluetooth si emeghe ihu ọhụrụ
Friday, December 3, 2021 Tọzdee, Disemba 2, 2021 Sesie Bonsi
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-atụ egwu nbudata ngwa ọzọ ka ha na-anọdụ ala maka nri abalị na ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Ka Covid-19 kpalitere mkpa ịtụ ụtụ na ịkwụ ụgwọ na-enweghị kọntaktị, ike ọgwụgwụ ngwa ghọrọ akara nke abụọ. A na-ahazi teknụzụ Bluetooth ka ọ kwalite azụmahịa ego ndị a site n'ikwe ka ịkwụ ụgwọ na-enweghị mmetụ aka n'ogo ogologo, na-eji ngwa ndị dị ugbu a mee ya. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya kọwara ka ọrịa ọjọọ ahụ siri mee ngwa ngwa nnabata nke teknụzụ ịkwụ ụgwọ dijitalụ.
4 n'ime ndị ahịa US 10 agbanweela na kaadị ndị na-enweghị kọntaktị ma ọ bụ obere akpa ekwentị dị ka ụzọ ịkwụ ụgwọ mbụ ha kemgbe Covid-19 kụrụ.
PaymentsSource na American Banker
Mana kedu ka teknụzụ Bluetooth si atụta ọganihu na teknụzụ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ na-enweghị kọntaktị dị ka koodu QR ma ọ bụ nzikọrịta ozi dị nso (ubi)NFC)?
Ọ dị mfe: ike ndị ahịa. Gender, ego, na obodo niile na-emetụta ka onye na-azụ ahịa si dị njikere iji teknụzụ ịkwụ ụgwọ ekwentị. Mana dịka onye ọ bụla nwere ohere ịnweta Bluetooth, ọ na-enye atụmanya na-ekwe nkwa maka ụzọ ịkwụ ụgwọ dị iche iche ma nwee ike iru ndị mmadụ dị iche iche. Nke a bụ ka Bluetooth si emeghe oke ọhụrụ maka ntinye ego.
Ịkwụ ụgwọ na-enweghị kọntaktị na-eme mkpesa
Covid-19 gbanwere echiche nke ndị na-azụ ahịa maka ịkwụ ụgwọ enweghị kọntaktị dị ka obere kọntaktị anụ ahụ na Points of Sale (naa) ghọrọ ihe dị mkpa. Enweghịkwa ịlaghachi azụ - nke accelerated nkuchi nke teknụzụ ịkwụ ụgwọ dijitalụ bụ ebe a ịnọrọ.
Ka anyị were ọnọdụ na nke ụkọ nke microchips nke emetụtala ọkọnọ nke ukwuu. Ọ pụtara na kaadị ga-apụ n'anya tupu ego na, n'aka nke ya, nke ahụ ga-enwe mmetụta dị njọ na ohere ndị mmadụ na-enweta na akaụntụ ụlọ akụ. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa iji kwalite usoro ịkwụ ụgwọ tupu nke a emee.
Mgbe ahụ, ọbụlagodi na cryptocurrency, enwere dichotomy dị ịtụnanya. Anyị nwere uru ego echekwara na dijitalụ, mana mgbanwe mgbanwe crypto na obere akpa ndị a ka na-ebuga ma na-enye kaadị. Teknụzụ dị n'azụ ego a bụ dijitalụ, yabụ na ọ dị ka enweghị nghọta na ọ nweghị usoro ịkwụ ụgwọ dijitalụ. Ọ bụ mmefu ahụ? Ahụhụ adịghị mma? Ma ọ bụ gbadata ntụkwasị obi?
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ego na-eleba anya mgbe niile ụzọ ha ga-esi bufee ọrụ ndị ahịa, ha enweghị ike ịdị ka aka ha na njedebe. Nke ahụ bụ ebe achọrọ ụzọ ọzọ iji wepụta ahụmịhe dị mma na njedebe n'ihu.
Ọ bụ teknụzụ Bluetooth na-enye ndị ahịa na ndị ahịa ohere, mgbanwe, na nnwere onwe n'ụzọ ha na-ahọrọ ka ha na ibe ha na-agbanwe uru. Enwere ike ịmegharị ahụmịhe iri nri ma ọ bụ mkpọsa ọ bụla n'ihi na ọ dịghị mkpa ibudata ngwa dị iche iche ma ọ bụ ọbụna nyochaa koodu QR. Site na ibelata esemokwu, ahụmihe ndị a ga-adaba adaba, na-ejikọta ya na nke mmadụ niile ga-eru.
Ebe n'ofe ụdị ekwentị dị iche iche
Mgbe a na-elele ahịa ndị na-apụta na mpaghara akụ na ụba ọha na eze dị ala, ọ pụtara ìhè na e debela ha na ụlọ ọrụ ego ọdịnala. Nke a bụ n'ihi na teknụzụ NFC, dị ka Apple Pay, anaghị akwado n'ofe ngwaọrụ niile na ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ị nweta iPhone. Nke a na-amachi ọganihu ma na-edobe ụfọdụ atụmatụ na ọrụ maka ọkwa ọkwa nwere ohere ịnweta ngwá electronic.
Ọbụlagodi koodu QR yiri ka enwere ebe niile chọrọ igwefoto dị elu na ọ bụghị ekwentị niile nwere ọrụ ahụ. Koodu QR anaghị eweta azịza nwere ike ịgbatị: Ndị ahịa ka ga-anọrịrị nso koodu maka azụmahịa ga-eme. Nke a nwere ike ịbụ mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ngwaike nke na-arụ ọrụ dị ka onye na-ahụ maka ego n'etiti onye na-ere ahịa, onye ahịa na onye ahịa.
N'elu elu, n'ime afọ iri abụọ gara aga, enyerela Bluetooth aka na ekwentị ọ bụla, gụnyere ngwaọrụ ndị dị ala. Na nke ahụ na-abịa ohere iji Bluetooth na-eduzi azụmahịa ego, na-enye ndị ọrụ ohere iji teknụzụ na-enweghị ike iru. Nke a dabara na ike ndị ahịa ka ewepụrụ ngwaike kpamkpam yana azụmahịa ahụ gụnyere POS nke onye ahịa na onye ahịa.
Bluetooth na-ewetakwu ohere maka ụmụ nwanyị
Ndị ikom na-egosipụta mmasị karịa ụmụ nwanyị iji obere akpa mkpanaka maka ịntanetị na ịzụrụ ihe n'ime ụlọ ahịa mana ihe dịka 60% nke mkpebi ịkwụ ụgwọ bụ nke ụmụ nwanyị na-eme. Ebe a bụ nkwụsị na nnukwu ohere maka ụmụ nwanyị ịghọta ike nke teknụzụ ọhụrụ na-apụta.
Ịkwụ ụgwọ teknụzụ' imewe na UX na-abụkarị ndị ikom na-emepụta na, na-elele akụ na-emepụta ma ọ bụ cryptocurrency, o doro anya na ụmụ nwanyị ahapụla. Ịkwụ ụgwọ Bluetooth na-enye nsonye maka ụmụ nwanyị nwere ahụmịhe ndenye ọpụpụ dị mfe, enweghị esemokwu na nke dabara adaba.
Dị ka onye guzobere ikpo okwu teknụzụ ego na-eme ka ahụmịhe ịkwụ ụgwọ na-enweghị mmetụ aka, ọ dị oke mkpa iburu ụmụ nwanyị n'uche maka mkpebi UX, ọkachasị n'ahịa na-apụta. Anyị chekwara na ọ bụ ihe kacha mkpa ịnye ndị isi ụlọ ọrụ ụmụ nwanyị ọrụ site na ijikọ na netwọkụ na ụlọ ọrụ ịkwụ ụgwọ dị ka Netwọk ịkwụ ụgwọ ụmụ nwanyị Europe*.
N'ime afọ iri gara aga, pasentị nke azụmahịa isi ego na-agara ndị inyom na-emepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ. Ma ụfọdụ ngwa kachasị mma dị bụ nke ụmụ nwanyị haziri ma ọ bụ nwee ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ njikwa ịkwụ ụgwọ. Chee echiche Bumble, Eventbrite, na PepTalkHer. N'iburu nke a n'uche, ụmụ nwanyị kwesịkwara ịbụ ndị na-ebute ụzọ na mgbanwe mgbanwe Bluetooth.
Ọganihu kachasị ọhụrụ na Bluetooth nwere ike ikwurịta okwu site na ngwaọrụ POS nke onye ahịa, ọdụ ngwaike, ma ọ bụ ngwanrọ gaa na ngwa ozugbo. Echiche bụ na enwere ike itinye ngwa ụlọ akụ ekwentị mkpanaaka dị ugbu a iji zụọ ahịa n'elu Bluetooth, jikọtara ya na ọdịdị Bluetooth dị ebe niile, na-enye ohere maka ndị sitere n'ụdị ọnọdụ akụ na ụba dị iche iche, okike na azụmaahịa.
Gaa na Bleu
* Nkpughe: Onye isi oche EWPN nọ ọdụ na bọọdụ na Bleu.
Tags: apụl ụgwọacha anụnụ anụnụBluetoothịkwụ ụgwọ bluetoothakpaghi akaịkwụ ụgwọ kọntaktịCOVID-19cryptocurrencyugwo dijitalụteknụzụ ịkwụ ụgwọ dijitalụndị ahịa na-apụtaNetwọk ịkwụ ụgwọ ụmụ nwanyị Europeteknụzụ egofintechnhazi ịkwụ ụgwọ ekwentịugwo ugwoobere akpa mkpanakana nso nso nkwukọrịtanfcọrịaugwo nhaziisi iyi ịkwụ ụgwọnaaUsoro QRuxmkpebi ux
Sesie bụ onye ọka iwu nwere ikike dị elu na ihe ọmụma na mpaghara teknụzụ mkpanaka na akụrụngwa gụnyere mana ọnweghị oke na ụkpụrụ nkwukọrịta ụwa, usoro ịkwụ ụgwọ ekwentị na ụkpụrụ ego, m-azụmahịa, na ụkpụrụ azụmahịa mmekọrịta ọha. Ndị otu egwuregwu na-agba mbọ na mkpali nwere nkà nyocha azụmahịa dị elu yana ikike inyocha na melite usoro azụmahịa na teknụzụ mkpanaka. Jide patent abụọ na teknụzụ ịkwụ ụgwọ. Visa Technology Partner, na FIS Fintech Accelerator Cohort 1 onye nchoputa. Ọkachamara dị irè ma dị uchu nwere nzụlite dị iche iche na azụmaahịa, azụmahịa, iwu na nhazi nhazi.
Clearbit: Iji ọgụgụ isi oge dị adị iji hazie ma kwalite webụsaịtị B2B gị